Ogaden News Agency (ONA) – Filim: Kulan Madaxda JWXO la yeesheen Jaaliyaadka Ogadeniya Iyo Somalida ku nool Wadanka UK
Filim: Kulan Madaxda JWXO la yeesheen Jaaliyaadka Ogadeniya Iyo Somalida ku nool Wadanka UK
Hoos Ka Daawo Filimka Shirka:
London (ONA) 29/01/12 Magaalada London waxaa lagu qabtay shir wayn oo oo lagaga hadlayay arrimaha Geeska Afrika iyo maaraynta dhibaatada Ogaadeenya. Shirkan waxaa soo agasintay Jaaliyadda Ogaadeenya ee magaalada London dalka Britain, waxaana ka qayb galay hoggaanka sare ee Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya JWXO, Aqoonyahaniin soomaaliyeed iyo dadwayne aad u fara badan oo isugu jira kuwo u dhashay dalka Ogaadeenya iyo waddanka Somaaliya. Kuwaas oo kakala yimaday Magalada London iyo Gobalada Ingiriiska. Shirkan oo aad loosoo aggaasimay waxa goob joog ahaa saraakiil ka tirsan policeka magalada London.
Shirkan waxaa furay guddoomiyaha Jaaliyada Ogaadeenya ee London Xuseen Geele oo gacmo furan kusoo dhaweyay bulshada sidoo kale Cusmaan Badal oo katirsan madaxda Hogaanka Jaaliyaadaha oo ka faallooday wax-qabadka Jaaliyadda iyo doorka ay ku leedahay kobcinta dhaqanka iyo isku xidhka dadwayanha. Waxaa wacdi kooban oo furitaan ah shirka ka soo jeediyay Xaaji Xasen Sheikh Iraad, oo ka qayb galayaasha shirka xusuusiyay sida loogu baahan yahay in mar walba la xusuusnaado cabsida Eebe, isla markaana loo darbanaado sidii wax loogu qaban lahaa dadwaynaha dulman ee reer Ogaadeenya ee gumauysigu haysto.
Ka dib waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay guddoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan, oo si qoda-dheer uga hadlay dhibaatooyinka gobolka Geeska Afrika, isla markaana tilmaamay in dhibaatooyinkaas oo dhan ay bud-dhige u tahay dhibaatada Ogaadeenya. Guddoomiyuhu wuxuu kale oo ka warbixiyay xidhiidhka la sheegay ee wada hadalka Ethiopia iyo Ururka ONLF dhexmari kara, Waxa uuna shirka ka cadeeyay illaa hada inaysan jirin wax kulan ah oo labada dhinac ay yeesheen. Waxuu bulshada u sheegay in ururku diyaar u yahay in wada hadal lagalo Ethiopia haddii ay shuruudaha Ururuka buuxinayaan oo ah in wadan sadexaad iyo goobjogayaal dhexdhexadiya la helayo. Sidoo kale waxa uu bulshada u balan qaaday in lagala tashan doono lalana socodsiin doono waxii yimaada. Waxa kale oo uu gudomiyahu shacabka u sheegay in war suuqeedka aysan dhag u dhigin oo halgankooda ay xoojiyaan.
Waxa uu Gudomiyuhu ka warbixiyay shirqooladi horey ay Ethiopia ugeysatay iyaga oo dhahaya wada hadal ayaan rabnaa, sidoo kale waxa uu tilmaamay xadgudubyada ay ciidammada Itoobiya u gaystaan dadwaynaha iyo cunaqabataynta naxariis darrada ah ee xukuumadda Itoobiya ay muddada dheer ku haysay dadwaynaha Ogaadeenya. Guddoomiyuhu wuxuu si faahfaahsan uga hadlay siyaasadaha gumaysiga Itoobiya ee ku wajahan gobolka Geeska Afrika iyo sida xukuumadda Itoobiya ayna marna raalli uga noqonayn In la helo dowlad soomaaliyeed oo si fiican u tabarisa. Waxuuna ugu baaqay shacabka Somaliyeed inay u madaxbanaanadaan arrimaha Somaliya oo aysan cidna ku tiirsanaanin.
Guddoomiyuhu wuxuu dadwaynaha geesiyiinta ah ee Somalida Ogaadeenya ku ammaanay taageerada ay la garab taagan yihiin halganka iyo adkaysiga u muujiyeen dhibaatooyinka uu gumaysiga ku hayo, wuxuuna ugu baaqay inay dadaalkooda sii labanlaabaan, si ay guushu u soo degdegto.
Haddii ay Itoobiya Maanta Rabto Wadahadal, Bilaash kuma imaan ee waxaa keenay Gabdhaha iyo Wiilasha Ogadeniya ee dhiigooda huray. Meesha aynu is dhigno ayuunbaa la innoogu imaan sidaas awgeed waa in aynu kor usii qaadno dadaalkena aynu ku raadinayno xoriyada dhulkeena iyo dadkeena. ayuu kuso gabagabeeyay gudomiyaha oo qudbadisi qodobo dhowr ah kaga hadlay.
Waxaa isaguna goobta shirka ka hadlay guddoomikyaha Hoggaanka Arrimaha Dibada ee JWXO C/raxmaan Sh Mahdi, oo si xeel-dheer u kala dhigdhigay siyaasada arrimaha ee JWXO, isagoo caddeeyay in JWXO ay gumaysiga kaga guulaysatay guud ahaan goobaha caalamiga ah ee daneeya arrimaha Geeska Afrika.
Wuxuu tilmaamay oo uu ka warbixiyay adkeysiga iyo biseylka bulshada Ogadeniya dhan siyaasi iyo dhan hoggaamineedba. Waxa uu kawarbixiyay adkeysiga shacabka somalida Ogadeniya ay u leyihiin la dagalaanka Gumeysiga.
Horey innuu usocdo mooye Marna Hoos uma dhicin, Mana istaagin dadaalka loogu jiro xoriyada ee shacabka Ogadeniya wado.
Guddoomiyuhu wuxuu sidoo kale ka hadlay siyaasadda cusub ee Itoobiya, iyo Wadahadalka waxa uuna si adag u sheegay in aysan qaadan doonin Nabad Dooro leh. Marna Hoggaaminta Ururka ONLF ee Halganka Somalida Ogadeniya gadan maayo masiirka ummada oo ah aayo katashi iyo xoriyad.
Waxaa kaloo shirka ka hadlay guddoomiyaha Hoggaanka Arrimaha Jaaliyadaha Cabdi Yaasiin (Diirrane) oo tilmaan ka bixiyay ujeeddada dagaalka Ogaadeenya ka socday iyo sida ay JWXO uga go’an tahay inay dagaalkaas waddo ilaa ay guusha ka gaadhayso. Waxa uu Shacabka ku adkeyay in halganka ay sii laba jibaaran.
Shirka waxaa ka hadlay General Sayid Cabdifatah Jaamac Caamir, oo ah siyaasi rug-caddaa ah oo xilal sarsare ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya ka jiray intii ka horraysay burburkii Soomaaliya. Sayid C/fataax Jaamac Caamir wuxuu ku dheeraaday oo kawarbixiyay xasuus qorka taariikhda Halganka shacabka Somalida Ogadeniya isaga oo taarikho 100 sanno ka hor dhacay bar-bar dhigid ku sameeyay waxa maanta taagan.
Ambasadar Dahir Afey, oo ah siyaasi soomaaliyeed oo aad loo yaqaano, kana soo jeeda dhulka Somalida Ogadeniya ayaa isaguna ka hadlay goobta shirka. Ambasador Dahir wuxuu ku dheeraaday hagardaamooyinka ay Itoobiya u maleegayso dadka soomaaliyeed, meel kastoo ay ku nool yihiin. Wuxuu ka codsaday bulshada inay ku kalsoonadaan madaxdooda ururka oo ay ku garab istagaan holwaha ay hayaan. Waxa kale oo uu Ambasadaror Dahir uu sheegay madaxda Dhabta ah ee Halgankeenu waa dadkii usoo shahiiday kuwaas ayaa madaxdeena dhabta ah oo aynu tixgalin siinayna inaga oo hirgalinayna mabda’ii ay u shahiideen. Waxa uu Ambasadorku sheegay in Halganka la xoojiyo oo dhaqaalaha la hurro oo halganka la taageero.
Shirkan oo siyaasiyin badan oo rugcadaa ahi ka hadleen waxa aan ka madhneyn Gabayo dhiiga dadka dhaqaajiyay oo ay ka tirisay goobta gabadh kasoo jeeda Jamuhuriyada Somaliya. Gabaygaas oo sawaxan badan mashxarado iyo qaylo sacab leh ka abuuray madashi shirka.
Waxa kale oo Gabayo taariikhi ah oo ku aadan gabayadii uu Sayid Maxamed Cabdule Xasen ka tiriyay heshiisyadii iyo wadahadaladi dhexmaray Gumeysigi cadaa iyo daraawiishti goobta kasoo jeediyay Maxamed Faarax Cawl oo ah nin aad ugu xeel dheer aqoonta Sayid Maxamed Cabdule Xasen oo qoraalo badan kasameyay.
Waxa kale oo Marwo Koos shariif ay ka tirisay Buraanbur ay kaga hadlayso qadiyada Somalida Ogadeniya kuna amaanayso shacabkeeda iyo Madaxda ururka.
Abwaan Jaango ayaa isna gabayo kaso jeediyay madasha iyo Fanaanka aadka loo jecelyahay ayaa isna ka madhneyn Cabdi Khaliq Xaaji Siraad oo halkaas heeso halgan ka qaaday.
Shirkan oo waayeel iyo Caruurba ay ka hadleen ayaa waxa qiso ka dhigay laba gabdhood oo yar yar oo halkaas kasoo jeediyay qudbad ku baxaysa luqada Ingiriisiga kuna cabirayay aragtidooda ku aadan dhulkooda hooyo.
“Inakstoon dayarahay hadana waxa jecelahay erey ama labo inaan sheego. Qof bani aadam ah oo aan Xoriyad heysan maahan bani aadam. Iyaga oo la hadlaya Waalidiinta Caruurta Ogadeniya qeyrkood ah waxa ay sheegeen inaysan gumeysi kusii jirin sida awoowyadeen ay gumeysiga ugu hoos jreen waxa ayna waalidkood u sheegen in ay yihiin caruur aan isdifaaci karin sida dadka waaweyn oo kale sidaas awgeed Waxa aan idinka baryaynaa inaydaan Gumeysigii ay waalidkiin idiinka tageen oo kale anagana hanooga tagina. Waxaan idinka codsanayna inaad dhulkeena noo xoreysaan. Barbarkay ka baxda waa Bakaylo Galeen, Ogadeniya ha xorowdo.” Waxa sidaas yiri Hodan Cabdi iyo Maxbuuba Shariif oo kamid ah Caruurta Somalida Ogadeniya ee ku nool wadanka UK.
Ururka Haweenka Somalida Ogadeniya ayaa waxa u hadlay Eedo Hibo oo halkaas ka sheegtay in haweenku ay yihiin lafdhabarta halganka Somalida Ogadeniya, waxayna balan qaadey haweenka Ogadeniya inay siday awalba jiida hore halganka ugaga jireen inay ahaanayaan waligood, Waxa ay amaan usoo jeedisay Madaxda ururka oo ay ku amaantay shaqo wanaag iyo kalsooni badan oo bulshadu ku qabto sida ay u guttaan xilalkooda.
Odeyada ayaan meesha ka maqneyn Professor Cadami ayaa goobta kasoo jediyay ereyo gubaabo ah, sidoo kale Duq Gama’diid ayaa Jabhada ka codsaday in ciidanka aad loo xoojiyo oo tababaro fiican la siiyo.
Shirkan aya waxaa iyaguna ka hadlay suxufiyiin, aqoonyahanno iyo abwaano soomaaliyeed oo dhammaantoodba muujiyay taageerada ay u hayaan halganka Ogaadeenya.
Gabagabadi shirka ayaa waxa shacabkii shirka kasoo qeybgalay ay su’alo weydiyeen Madaxda ururka su’alahaas oo u badna warbaahinta Ogadeniya iyo sidii loo horumarin lahaa. Waxa dadka ay ahaayeen dad aad ugu qanacsana warbixintii loosoo gudbiyay waxayna su’alahaoda iyo aragtiyaday ay dhibanayeen ku dhisnayeen mid horumarineed oo leh sideen halkaas u horumarin karnaa iyo sideen meeshaas wax looga qaban kara. Shucuurta shacabka ayaa shirkani ahaa mid aad u sareysa oo kacsan.
Shirkan waxaa si hab sami ah u hagayay oo xidhiidhinayay Cabdi cade Guure oo ah xubnaha jaaliyada Manchester , oo si aad u qurux badan u agaasimay shirka.
Filimo kale dhowaan ayaad heli dontaan ee lasoco wararka ONA.